Huawei Watch GT 2: smartwatch-ka cusub ee shirkaddu waa rasmi | War gadget
Marka lagu daro Mate 30 cusub, Huawei ayaa shalay naga tagtay iyada oo leh warar dheeraad ah munaasabaddeeda bandhigga. Nooca Shiinaha ayaa sidoo kale si rasmi ah u soo bandhigay smartwatch cusub. Waxay ku saabsan tahay Huawei Watch GT 2, oo ah jiilka labaad ee qaabkan, ka dib natiijooyinkii wanaagsanaa ee sanadkii hore laga soo saaray kii ugu horreeyay. Iibkeeda ayaa kor u dhaaftay 10 milyan, sida ay shirkaddu shalay sheegtay
Saacadan cusub ayaa daadanaysay maalmo ka hor. Marka naqshadeedu horeyba wax ay noo ahayd waan ognahay, laakiin hadda ugu dambayntii waa rasmi. Huawei Watch GT 2 waxaa loo soo bandhigayaa sidii saacad xiiso weyn leh, oo leh qeexitaanno wanaagsan, marka lagu daro imaatinka iyada oo horumarin gaar ah lagu sameynayo shaqooyinkeeda.
Naqshadeynta saacadda ayaa xaday toddobaadkan. Waxay dooratay qaab xarrago leh, naqshad raaxo leh, laakiin taasi way iska caabbineysaa marka la ciyaarayo cayaaraha. Waxaan helnaa jiis bir ah oo aad u dhuuban, kaas oo sidoo kale ka dhiga saacad aad u fudud. Shaashadda, muraayad 3D wareegsan oo geesaha qalooca ayaa la isticmaalay, oo siineysa adeeg aad u raaxo badan.
Intaa waxaa sii dheer, tan 'Huawei Watch GT 2' waxay la timid qaabab aad u kooban. Dhinaca midig ee saacadda waxaa ku yaal laba badhan, taas oo kudayanaysa taajyada saacada caadiga ah. Way fududahay in la isticmaalo waxayna noo oggolaan doonaan inaan ku wareejino isdhexgalka ama helitaanka shaqooyinka qaarkood saacadda.
Saacadda ayaa lagu bilaabay laba nooc oo suuqa ah, mid leh 46-milimitir dial midka kalena 42-milimitir dial. In kasta oo aan hayno xogta qaabka ugu weyn kiiskan, 46mm. Huawei Watch GT 2 ayaa la yimid shaashad cabbirkeedu yahay 1,39 inji Waa shaashad lagu sameeyay guddi AMOLED xalkeeduna waa 454 x 454 pixels.
Gudaha saacadda waxaa ku jira qalab loo yaqaan 'Kirin A1 chip'. Waa soo saaraha processor-keeda cusub ee aaladaha sida wearable. Xaqiiqdii, waxaan horeyba ugu aragnay FreeBuds 3 oo lagu soo bandhigay IFA bishan. Processor-ku wuxuu ka kooban yahay cutub ka shaqeynaya Bluetooth-ga horumarsan, oo ah qeyb kale oo maqalka wax ka qabta, wuxuuna si gaar ah uga dhex muuqdaa isticmaalka tamarta yar. Sidan oo kale, saacaddu waxay na siin doontaa ismaamul weyn.
Xaqiiqdii, sida ay Huawei u shaacisay soo bandhigideeda, Tani Huawei Watch GT 2 waxay na siin doontaa ismaamul ilaa laba toddobaad ah. In kastoo ay ku xirnaan doonto qeyb ahaan isticmaalka aan sameyno iyo shaqooyinkiisa. Haddii aan dooneyno inaan u isticmaalno cabbiraadda GPS si isdaba-joog ah, waxay na siin doontaa illaa 30 saacadood oo isticmaalka ah, oo ah nooca 46 mm, iyo 15 saacadood oo kan kale ah. Sidaa darteed waxay ku xirnaan doontaa adeegsade kasta iyo howlaha ay adeegsadaan.
Awoodda keydinta ee saacadda ayaa sidoo kale la ballaariyay. Ilaa hada, Huawei Watch GT 2 ayaa na siinaya meel lagu keydiyo ilaa 500 oo heesood dhib la’aan. Sidan oo kale, waxaan marwalba ku haysan doonnaa heesaha aan ugu jecel nahay gudaha.
Huawei Watch GT 2 waa saacad isboorti, sidaa darteed waxaan leenahay dhammaan noocyada howlaha isboortiga. Waxay awood u leedahay inay aqoonsato oo ay cabirto 15 isboorti oo kala duwan, gudaha iyo dibaddaba. Isboortiga aan ka dhex helno waa: orodka, socodka, fuulitaanka, orodka buurta, baaskiil wadida, dabaasha biyaha furan, triathlon, baaskiil wadida, dabaasha barkadda, tababarka bilaashka ah, mashiinka dhaadheer iyo mashiinka fuulista.
Faa'iidooyinka ugu waaweyn ee laga helo ayaa ah inaan awoodno inaan ugu isticmaalno dabaasha, dhammaan noocyada biyaha. Saacaddu waa IP68 sharciyeysan, taas oo ka dhigaysa mid aan biyuhu gelin. Shahaadadani waxay suurtogal ka dhigeysaa in lagu quusiyo ilaa 50 mitir, sida laga arki karo soo bandhigideeda, taasoo ka dhigeysa mid ku habboon in la isticmaalo marka isboortiga la sameynayo. Waxay sii wadi doontaa inay cabirto waxqabadkeena markasta, sida masaafada, xawaaraha ama garaaca wadnaha.
Sidaa darteed, iyadoo la adeegsanayo Huawei Watch GT 2 waan awoodnaa leeyihiin gacan ku haynta saxda ah ee hawsheena markasta. Shaqooyinkeeda waxaa ka mid ah cabbirka garaaca wadnaha, tallaabooyinka la qaaday, masaafada loo safray, kalooriyada gubatay, marka lagu daro cabirka heerka buufiska ee isticmaalayaasha. Hawlaha isboortiga ka sokow, saacaddu waxay na siisaa kuwo kale oo badan. Maaddaama aan ka heli karno ogeysiisyo dhexdeeda ah, helno wicitaanno, dhageysano muusikada mar walba, sidaa darteed waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ugu adeegsanno dhammaan noocyada xaaladaha oo dhan dhibaato la'aan.
Soo bandhigiddeeda, shirkaddu waxay xaqiijisay in Huawei Watch GT 2 uu socdo laga bilaabo Spain iyo Yurub dhammaan bisha Oktoobar. Waqtigan xaadirka ah ma jirin taariikh cayiman oo bisha Oktoobar ah oo la bilaabayo, laakiin hubaal waxaa jiri doona warar dheeraad ah oo arrintan la xiriira dhowaan.
Waa maxay rasmiga waa qiimaha labada nooc ee saacadda. Qaabka leh 42 mm dhexroor waa inaan bixinaa 229 euro. Haddii midka aan dooneyno uu yahay 46 mm mid, markaa qiimaha waa 249 euro kiiskan. Astaantu waxay ku bilaabeysaa iyaga oo leh midabyo kala duwan, oo leh noocyo kala duwan oo dheeri ah marka lagu daro, sidaa darteed waxaan ku leenahay xulashooyin badan goobtan.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Smartwatch » Huawei Watch GT 2: Nooca casriga ah ee casriga ah ayaa rasmi ah